Home Wararka Maanta Faah-faahin: Muxuu yahay howlgalka cusub ee ATMIS ee beddelaya AMISOM?
Dowladda Soomaaliya iyo Golaha Nabadda iyo Amniga ee Midowga Afrika ayaa dhowaan shaaciyey inay heshiis ka gaareen qaabka uu u ekaanayo hawlgalka cusub ee bedelaya AMISOM.
Howlgalkaan waxaa lagu heshiisyey in loogu magac-daro ATMIS, waxuuna bedelayaa hawlgalka Midowga Afrika ee AMISOM oo Soomaaliya ka jiray 14-kii sano ee lasoo dhaafay, sida uu shaaciye Agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya.
Dawladda Soomaaliya ayaa in muddo ahba dooneysay in hawlgalka Midowga Afrika uu noqdo mid ka turjumaya baahida dhismaha ciidamada iyo amniga Soomaaliya, si ay ugu suurta gasho dowladda inay AMISOM kala wareegto mas’uuliyadda amniga.
Hawlgalka AMISOM waxa uu soo shaqaynayey tan iyo bishii Maarso ee sanadkii 2007-dii.
Sida uu sheegay Agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya Xasan Maxamed Siciid Samatar oo la hadlay Idaacadda VOA waxaa lagu heshiiyey in howlgalka cusub ee ATMIS uu dhaqan galo kadib marka ay ansixiso Qaramada Midoobay.
ATMIS waxa kusii jiraya ciidamada AMISOM ee haatan ka howlgala Soomaaliya, hase yeeshee waxaa u furan inay waddamo kalena ka qayb-qaataan.
“Dowladda Soomaaliya, Midowga Afrika iyo Qaramada Midoobey waxay ku heshiiyeen barnaamij kala guur ah, kaas oo mudo loo sameeyey, waxaa la go’aamiyey in bisha Maarso loo gudbiyo Qaramada Midoobey loo gudbiyo heshiiskaan, si howlgalkaan cusub uu u hir-galo, markey u codeeyaan 1-da Abriil waxaa Soomaaliya ka dhaqan geli doona howlgalka ATMIS,” ayuu yiri
Agaasimaha wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya Xasan Maxamed Siciid Samatar ayaa sidoo kale sheegay in howlgalka cusub uu uga duwan yahay kan AMISOM in dowladda Soomaaliya ay awood u yeelaneyso in wax kasta ay ku socdaan ogolaanshaheeda.
“Heshiiska aan saxiixnay waxaa ku qoran in 31-ka December 2023-ka ay dalka ka baxaan ciidanka Midowga Afrika, waxaa hari doona ciidan yar oo dhameystira daabulaada qalabka, waxaa dhici kara dib u dhacyo aan badneyn, laakiin ugu dambeyn ilaa seddax sano ayuu sii qaadan doonaa howlgalkaan,” ayuu yiri Agaasime Xasan Maxamed Siciid Samatar.
Sidoo kale Agaasimaha ayaa sheegay in heshiiskaan uu dowladda Soomaaliya u saamaxayo in waqtiga ay soo gaabiso ama dheereysato, iyadoo ku dabaqeysa hadba awoodeeda.
Dhanka kale waxa uu sheegay in heshiiskaan uu sahlayo in ciidanka Soomaaliya laga taageero sidii ay u heli la haayeen hub ku filan, isagoo shaaciyey inuu socdo qorshe cunaqabateynta hubka looga qaadayo Soomaaliya.
“Beesha Caalamka waxaa laga codsaday inay qorshahaan taageeraan waana ogolaadeen, sidoo kale waxaa socda dadaal ah in cunaqabateynta hubka laga qaado Soomaaliya, sababtoo ah qorshahaan ma guuleysa doono hadii aan dalka laga qaadin cunaqabateyntaas,” ayuu yiri Agaasime Xasan.
Sidoo kale waxaa is bedelaya sanduuqii bixi jira kharashka howlgalka ciidanka shisheeye ee ku sugan Soomaaliya, Midowga Afrika oo horay u bixi jiray kharashka howlgalkaas ayaa hadda gacanta ka taagay kadib duruufo lasoo dersay, balse beesha caalamka ayaa ogolaatay inay bixiso dhaqaalaha ku baxaya howlgalka ciidanka shisheeye ee Soomaaliya ku sugan oo hadda loogu magac-daray ATMIS.